Wasiir Siciid Maxamed Raage: “Ciidamada PSF iyo kuwa PMPF nagama amar qaataan” (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 8, 2019 3:30 g 1
Magaalada Bosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxa ay saldhig u tahay ciidamada ugu xoogga badan Puntland, uguna dhaqaale fiican. Ciidamadaas ayaa kala ah Ciidanka Difaaca Puntland ee loo yaqaan PSF (Puntland Security Force), ayna maalgaliso dowladda Mareykanka, qaybta Africa Command Center Jabuuti ee Combined Joint Task Force, Horn of Africa (CJTF-HOA), iyo ciidanka Booliska Badda ee ayana loo yaqaan PMPF oo ay maalgaliso dowladda Imaaraadka Carabta.
Labada ciidanba waxaa saldhig u ah magaalada Bossaso. Isla magaalada Bossaso ayaa labadii sano ee ugu danbaysay waxaa soo wajahay ammaandarro sababtay in ganacsatadii qaar la laayo, qaar ururada argagixisada ee Daacish iyo Al-Shabaab ay canshuur ku soo rogaan, qaarna aysan guryaha ka soo bixin amaba ay magaaladii isaga cararaan.
Dhibka intaas le’eg intii uu socday badanaa hoggaamiyayaashii ciidamada ammaanka Puntland waxa ay noqdeen kuwo isu sharraxa xil Madaxweyne Puntland iyo kuwo isu sharraxa Xildhibaano.
Xilligii ololaha doorashooyinka Puntland, musharrax Siciid Cabdullaahi Deni, haddana ah Madaxweynaha Puntland, ayaa si fiican farta ugu fiiqay dhibka iyo musuqa ka dhextaagan ciidamadii ammaanka ee la rabay in ay sugaan amniga magaalada Bossaso. Deni ayaa ballan ku qaaday in uu wax weyn ka baddali doono nidaamka amni ee Puntland iyo habmaamulka jira.
Doorasho kabacdi, waliba maalmo kahor, waxaa dhacay dilkii Agaasimaha shirkadda PO & Ports ee Dekedda Bossaso maamusha, kaas oo dadki qaarki u arkeen in uu ahaa dhabarjabin lala beegsaday Madaxweyne Deni. Madaxweyne Deni ayaa si kulul uga hadlay dilkaas, laakiin aan ka hadlin doorkii ammaan ee laga sugayey ciidamada ammaanka Puntland, magac kasta oo ay huwanyihiin.
Ammaanka Bossaso oo xilligii doorashada ay sugayeen ciidamada PSF iyo PMPF ayaan warkooda la maqal sidii loo doortay Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Taasna waxaa xigay dilkii Paul Formosa, Agaasimahii PO & Ports ee Dekedda Bossaso, iyo sidii foosha xumeyd ee dilaagiisa shacabku ay kaamerooyin uga duubteen, aan ammaankiisa loo sugin, isla habeenkiina la soo sheegay in uu cisbitaalka ku dhintay, asaga oo dhaawac gacanta kaliya ka qaba.
Taasna waxaa xigtay Madaxweyne Deni in uu amaro Taliyaha Booliska Puntland oo ciidamo boolis ah oo uu hogaaminayo lagu dul furo Bossaso. Marnaba lama soo hadalqaadin doorka ciidamada PSF iyo PMPF.
Sidaas darteed shacabka Puntland waxa ay iswaydiinayaan sababta ciidamado boolis oo Garoowe laga keenay loo geeyey Bossaaso maadaama ay Bossaso joogaan ciidamada ugu xoogga badan Puntland, kalana ah PSF iyo PMPF?
Isla su’aashaas waxaan weydiinay Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage oo maanta marti noogu ahaa barnaamijka Maanhadal ee Radio Daljir. Wasiir Siciid Raage ayaa sheegay in ciidamada PSF iyo PMPF aysan ka amar qaadan dowladda Puntland.
Haddaba ciidamada PSF iyo PMPF yey ciidamo u yihiin, muxuu se noqon doonaa qorshaha cusub ee Madaxweyne Deni kuna aaddan ciidamada iyo ammaanka Puntland?
Barnaamijka Maanhadal hoos kaga bogo:
MAANHADAL: Dilalka Bosaaso iyo mustaqbalka maamulka dekedda Bosaaso (dhegayso|daawo)
Hoos kadaawo Wasiirka.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20418
Warka Fiidnimo iyo Axmed Nadiif, Daljir Garoowe (dhegayso | daawo)
Waa shidmi la yahay codku maxaan sameeyaa